साम्राज्ञीको घटिया सोच भन्दै गर्जिए सोभित, अब १ डेढ लाख दिने औकात नभएको आरोप – Sidha Onlinepatra
मुख्य पृष्ठ /News/साम्राज्ञीको घटिया सोच भन्दै गर्जिए सोभित, अब १ डेढ लाख दिने औकात नभएको आरोप
नेपाली सिने नगरिको करिब आधा दर्जन विवाद र चर्चा सेलाउदै गर्दा अर्को अन्तरद्वन्द्व सुरु हुने छाटकाट देखिएकी छ । साम्राज्ञी भुवनको विवाद चरम उत्कर्समा पुगेर हाल सेलाउदै गएको परिस्थितिमा कलाकार तथा निर्माता सोभित बस्नेत र नायिका साम्राज्ञी राज्य लक्ष्मी शाहको विवादले सामाजिक संजालमा स्थान पकड गर्न सुरु गरेको छ ।
बस्नेतले भुवन र साम्राज्ञी बिचको विवादमा सुरु देखि नै बोल्दै आएका थिए । उनले भुवनलाई सपोर्ट गर्दै साम्राज्ञीलाई गलत भनिरहेका थिए । केही दिनअघि अर्को एक अन्तरबार्ताको क्रममा बस्नेतले बोलेको कुरा देखे पछि साम्राज्ञी ले आफ्नो ईन्स्टा स्टोरिमा केही मिनेटको भिडियो सार्बजनिक गर्दै यस्तो भनेकी थिइन् :
‘एक जना मानिसले मैले विरगञ्जमा रिक्सा चढेर हिड्थ्यो भन्नुभएछ । म उहाँलाई त व्यक्तिगत रुपमा चिन्दिनँ । तर, उहाँको छोरा मेरो राम्रो साथी हो । हो, म विरगञ्जमा रहँदा रिक्सा चढ्थेँ । यसपछि, म दिल्लीमा बसेर पढेँ । अहिले काठमाण्डौमा छु । ठूला–ठूला कार चढौं कि के गरौं त्यो मेरा कुरा हो । रिक्सा चढ्दैमा मान्छे सानो हुन्छ र ? कस्तो सस्तो सोचाई ? मेरो साथी निकै राम्रो मान्छे हुन् । तर, उनको पिताको कस्तो सस्तो मानसिकता हो ?’ ‘म रिक्सा चढौं कि, टेम्पु चढौं कि, कार चढौं कि ? यसले मलाई सानो र ठूलो बनाउँछ त ? कस्ता कस्ता मानिसहरु मेरो विरुद्धमा बोलिरहेका छन् ?’
नेपालगन्जका ३०० जना कोरोना शंकाको घेरामा